9 qof oo ku dhimatay gaari lagu jiirsiiyay Toronto
24 Abriil 2018
Ninkii ka dambeeyay weerarkii Paris oo lagu xukumay 20 sano oo xarig ah
Saalax Cabdisalaam oo lagu tuhunsanaa yahay inuu ka dambeeyey weerarki Paris ka dhacay 2015 ayaa la sheegay inuu muteysanayo 20 sana oo xarig ah.
Askar gaari lagu jiirsiiyay Paris
Shan arrimood oo ku saabsan Saalax Cabdisalaam
Halkan ka ogaw shan arrimmood oo ku salaysan 28 sanno jirka Salaax Cabdisalam oo lagu eedeeyay inuu kaalin wayn ka qaatay weerarkii dhiigga ku daatay ee ka dhacay qaaradda Yurub.
Duqa magaalada Bishkek oo kormeer sameeyay isaga oo aan la aqoonsan karin
Albek Ibrhaimov ayaa warbaahinta gudaha dalkaas u sheegay in ujeedka uu yahay in uu si rasmi ah u ogaado xaaladaha dadka ay maalin kasta la kulmaan, gaar ahaan dhibaatooyinka xalka u baahan ee heysta.
Kumaa ka nasiib badan ninka ka badbaaday mas, libaax badeed iyo madax-kuti?
Wiil kusoo biiray qoyska boqortooyada Ingiriiska
Minneapolis : Haweenay lagu ganaaxay $500 hal xabo tufaax awgiis
Lix arrimood oo xasaasi ah oo laga sheegay Trump
Fadeexooyinkan cusub ee dhanka ka ah madaxweyne Trump ayaa sida uu sheegay agaasimihii hore ee FBI James Comey waxaa ku jira mid la xiriirta in madaxweynuhu uusan niyad ahaan taam ahayn, ayna dhici karto inuu cadaalad is hor taagay.
Paul Pogba: dhib kuma qabo Jose Mourinho
Dhibaatada bulsho ee Jaadka
Rayaan oo 18 sano jir ah waxay noqotay gabar kalluumeysato ah ka dib markii aabeheed uu dhintay, waxayna qaatay masuuliyadda qoyskeeda.
Iyadoo shalay uu is casilay guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Maxamed sheekh Cusmaan Jawaari, kaddib markii golaha baarlamaanka ay muddo todobaadyo ah ka dhex taagneyd xiisad siyaasadeed iyo kala qaybsanaan, ayaa waxaa la is weydiinayaa waxa xiga is casilaadda guddoomiyaha?
Maqal Dunida Iyo Maanta
Xiliga tabinta ‎13:59 GMT - 14:45 GMT
Maqal Caawa Iyo Caalamka
Xiliga tabinta ‎17:59 GMT - 18:19 GMT
Ka faa’ideysiga Technology-yada & Soomaalida.
Daawo: Roma oo khatyaan ka taagan qashinka
Akadeemiyadda BBC-da Akadeemiyadda BBC-da
1 9 qof oo ku dhimatay gaari lagu jiirsiiyay Toronto
2 Shan arrimood oo ku saabsan Saalax Cabdisalaam
3 Duqa magaalada Bishkek oo kormeer sameeyay isaga oo aan la aqoonsan karin
4 Kumaa ka nasiib badan ninka ka badbaaday mas, libaax badeed iyo madax-kuti?
5 Nin dhalinyaro ah oo gilgilay militariga Pakistan